March 1, 2018 – Thutastar
Comments Off on ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်အင်
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်အင် ယောက်ျားဆိုတာ ရုပ်ချောနေဖို့ ၊ တော်ကီကောင်းနေဖို့ အဓိက မလိုအပ်ဘူး။ ယောက်ျားဆိုတာ အသားဖြူ ဖို့ ၊ ဒီဇိုင်းဆန်းတွေ ဝတ်ပြနေဖို့ အဓိက မလိုအပ်ဘူး။ ယောက်ျားဆိုတာ အရပ်ရှည်ဖို့ ၊ ထင်ပေါ်နေဖို့ အဓိကမလိုအပ်ဘူး။ ယောက်ျားဆိုတာ မိန်းကလေးအများကြီးကို တွဲပြနိူင်ဖို့ အဓိကမလိုအပ်ဘူး။ ယောက်ျားဆိုတာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ဘယ်လောက်အထိ တာဝန်ယူနိူင်သလဲ….? မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဘယ်လောက်အထိ လုံခြုံမှူပေးနိူင်သလဲ..? ဆိုတာအပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးကွာသွားလို မိန်းမတစ်ယောက် အားကိုးချင်စရာကောင်းတဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့ပဲ လိုတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့…. “အိမ်ထောင်ကျသွားရင် အခြားသူတွေက သမီးယောက်ျား က ရုပ်အရမ်းချောလားလို့ မေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သမီးယောက်ျားက ဘာအလုပ် လုပ်သလဲလို့ မေးပါလိမ့်မယ်။” ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်အင်လက္ခာဏာဆိုတာ ကိုယ်ယူထားတဲ့ မိန်းမရဲ့ဘဝကို အပြည့်အဝတာဝန်ယူနိူင်ပြီး
Comments Off on “ထီပေါက်လို့ ပျော်နေတဲ့ စိုးပြည့်”
စိုးပြည့်လို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီျးေခာလေး စိုးပြည့်သဇင်ကေတာ့ ထီပေါက်လို့ အရမ်းကိုျေပ်ာနေပါတယ်..။ ယနေ့ မတ်လ(၁)ရက်နေ့ တေပါင်းလပြည့်နေ့လေးမွာ ထွက်ရွိတဲ့ (၁၂)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီမွာ ငါးသောင်းဆုကို ပေါက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ထီပေါက်သွားတဲ့ သူမရဲ့ျေပ်ာစရာသတင်းကောင်းလေးကို မင်းသမီျးေခာလေး စိုးပြည့်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမက်ြနွာကေန ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်ျမှဝေထားတာပါ..။ ငါးသောင်းဆုလေး ပေါက်တာ ဖြစ်ပေမယ့် အရမ်ျးေပ်ာနေပြီး သူမရဲ့ Lucky နံပါတ်လေးကိုလည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်..။ “ဒီနေ့ဥပုသ်နေ့လေး…..ထီ 50000 ပေါက်တယ်….မင်္ဂလာပါပေါ့နော် နည်းပေမဲ့လည်ျးေပ်ာတယ်…..44ကိုယ့်ရဲ့luckyနံပါတ်ပါ..” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ထီပေါက်သွားတဲ့ မင်းသမီျးေခာလေး စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ျေပ်ာစရာသတင်းကောင်းလေးကိုလည်း ပရိသတ်ကြီျးမားအတွက် ပြန်လည်ျမှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. Source – စိုးပြည့် fb
သမီးရင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်သည့်ဖခင် ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၈၀ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
Comments Off on သမီးရင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်သည့်ဖခင် ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၈၀ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ သမီးရင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ ဖခင်အမျိုးသားကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဗဟိုတရားရုံးက ဒီကနေ့မှာ ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၈၀ နဲ့ ကြိမ်ဒဏ် ၂၄ ချက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဆာရာဝပ်ခ်ပြည်နယ် တရားရုံးက ဒီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှု မတိုင်ခင်မှာ တရားခံက တရားရုံး ၄ ခုမှာ အသနားခံစာတင်သွင်း အယူခံဝင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမှ ခုလို အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ပြည်နယ်မြို့တော် ကူချင်းမြို့နဲ့ ၆၅ ကီလိုမီတာအကွာ ပါဒဝမ်ဒေသတွင်း နေအိမ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ မလေးရှားအခြေစိုက် ဘနားမားသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အသက် ၄၀ အရွယ် တရားခံအမျိုးသားဟာ သမီးဖြစ်သူကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်တာကာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လကတည်းက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ သမီးငယ်ဟာ အသက်
အကယ်ဒမီ လွင်မိုး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဖိုးလပြည့်ရဲ့ သီချင်းအသစ် ဗီဒီယို
Comments Off on အကယ်ဒမီ လွင်မိုး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဖိုးလပြည့်ရဲ့ သီချင်းအသစ် ဗီဒီယို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေရဲ့ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့်က ကာဗာသီချင်း အမ်တီဗွီတွေ တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ် ဖန်တီးလာရာမှာ ဒီတစ်ခါ ထွက်မယ့် သီချင်း အမ်တီဗီမှာတော့ မင်းသား လွင်မိုးနဲ့ ရဝေအောင်တို့လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Do You Know? လို့ အမည်ရတဲ့ သီချင်းကို ဖိုးလပြည်က ပြန်လည်သီဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ဒီသီချင်းနမူနာကို ဒီနေ့ပဲ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုးလပြည်က ဒီသီချင်းနဲ့ပါဆိုရင် သီချင်းလေးပုဒ်ရှိလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတိုင်းကို သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးနှစ်ပုဒ်မှာတော့ သူကိုယ်တိုင် ဆိုလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းသီချင်းများမှာ ခင်ဝင့်ဝါ၊ ပိုင်ဇေရဲထွန်း စသူတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ မြန်မာပြည်သိန်းတန်
နှစ်ပေါင်း ၅၅နှစ်ကျော်ကြာ မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ Alcatraz ထောင်မှ အကျဉ်းသား ၃ဦး လွတ်မြောက်မှု
Comments Off on နှစ်ပေါင်း ၅၅နှစ်ကျော်ကြာ မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ Alcatraz ထောင်မှ အကျဉ်းသား ၃ဦး လွတ်မြောက်မှု
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပင်လယ်အော်အတွင်းက Alcatraz ကျွန်းမှာတည်ရှိတဲ့ Alcatraz အကျဉ်းထောင်ဟာ တော်တော်လေးကို နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အကျဉ်းထောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြံရေးအပိုင်းမှာ လုံးဝစိတ်ချရလောက်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ရှိနေခဲ့ပေမယ့် အကျဉ်းသားသုံးဦးကတော့ ဒီထောင်ထဲကနေ ထူးထူးဆန်းဆန်း လွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို Alcatraz အကျဉ်းထောင်ကနေ အကျဉ်းသားတချို့ လွတ်မြောက်သွားခဲ့တာဟာ အခုဆိုရင် ၅၅နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ တင်းကျပ်စွာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးအပိုင်းတွေကြောင့် Alcatraz အကျဉ်းထောင်ထဲကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အကျဉ်းသားသုံးဦးကတော့ ဒီထောင်ထဲကနေ လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအကျဉ်းသားသုံးဦးကတော့ ဘဏ်ဓါးပြများဖြစ်တဲ့ Clarence Anglin, John Anglin နဲ့ Frank Morris တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သုံးဦးဟာ ၁၉၆၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ရက်နေ့က
မင်္ဂလာဦးညကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် သမီးဖြစ်သူမှ အမေထံ ပို့လိုက်တဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် စကားဝှက်စာစောင်
Comments Off on မင်္ဂလာဦးညကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် သမီးဖြစ်သူမှ အမေထံ ပို့လိုက်တဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် စကားဝှက်စာစောင်
သမီးဖြစ်​သူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီး… အမေဖြစ်​သူက “သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ.. ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့ လိုက်” ” ဟုတ် အမေ” နောက်ရက်ကျ သမီး ဆီကစာတစ်စောင် ဝင်လာတယ် “အမေ MAI-Yangon-Bangkok ပဲ” ဒဲ့ ။ အဲ့ဒါနဲ့အမေဖြစ်သူလည်း ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာသိရအောင် MAI ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်.. “MAI ရန်ကုန် ကနေ ဘန်ကောက်က လေယာဉ် အကြီးစားတွေ ဖြစ်ပြီးတစ်ရက် ၅ ကြောင်း ရှိပါတယ်။ တစ်ပါတ်မှာ ၇ ရက်လုံး နားရက် မရှိပါဖူး။ လေယဉ်တစ်ခါ ပြေးဆွဲချိန် ၄၅ မိနစ် ထိ ကြာပါတယ်။” အဲ့ဒါ ကြားပြီး တော့
မစင်ပုံဖြင့် တူတဲ့ သူနဲ့ အပေါင်းအပါကို မြန်မြန်ကျုံး၍ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ ဖို့ ဆော် သြော်နေတဲ့ သီတဂူ ဆရာတော် မိန့်ကြားမူ။
Comments Off on မစင်ပုံဖြင့် တူတဲ့ သူနဲ့ အပေါင်းအပါကို မြန်မြန်ကျုံး၍ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ ဖို့ ဆော် သြော်နေတဲ့ သီတဂူ ဆရာတော် မိန့်ကြားမူ။
သက်တော် ၈၁- နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လို့ပဲ သဘောထားကြပေါ့ ….့ ( ငြိမ်းချမ်းရေး ) မစင်ပုံဖြင့် တူတဲ့ သူနဲ့ အပေါင်းအပါကို မြန်မြန်ကျုံး၍ ဖမ်းဆီး ထောက်ချ ဖို့ ဆော် သြော်နေတဲ့ သီတဂူ ဆရာတော် မိန့်ကြားမူ။ ပြန်လည်ဝေမျှပါသည်။ ======================= သကျတျော ၈၁- နှဈပွညျ့ မှေးနအေ့ထိမျးအမှတျလို့ပဲ သဘောထားကွပေါ့ ….့ ( ငွိမျးခမျြးရေး ) မစငျပုံဖွငျ့ တူတဲ့ သူနဲ့ အပေါငျးအပါကို မွနျမွနျကြုံး၍ ဖမျးဆီး ထောကျခြ ဖို့ ဆျော သွျောနတေဲ့ သီတဂူ ဆရာတျော မိနျ့ကွားမူ။ ပွနျလညျဝမြှေပါသညျ။ သက်တော် ၈၁-
Comments Off on မယားငယ်များကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ပြီး ဆုံးမပေးနေတဲ့ ကြေးစား အမျိုးသမီး ဖိုက်တာ
အမြှောင်မယားများကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ပြီးဆုံးမပေးနေတဲ့ ကြေးစားအမျိုးသမီး တရုတ်နိုင်ငံ ဟီနန်စီရင်စုမှာတော့ Zhang Yufen လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးကို မသိတဲ့သူ မရှိသလောက် နည်းပါးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူမဟာ ‘Mistress Killer’လို့ခေါ်တဲ့ အမြှောင်မယားနှိမ်နှင်းရေးအေဂျင်စီတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ လင်ယောက်ျား ကြာခိုခံရတဲ့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခက်အခဲကို ကူညီဖြေရှင်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Yufen တို့ အေဂျင်စီဟာ အလုပ်အပ်လာသူတွေ ရှိလာခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာ ခင်ပွန်းနောက်ကို လိုက်လံထောက်လှမ်းခြင်း၊ကြာခိုတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလတ်တွေကို စုံစမ်းခြင်း၊ အဆိုပါအမျိုးသမီးကို ချုပ်နှောင်ရိုက်နှက်ရမည့် နေရာကို ဆုံးဖြတ်ချင်းစတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လေးစားခြင်းခံရတဲ့ အဖွဲ့လို့လည်း သိရပါတယ်။ Yufen ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခင်ပွန်းသည် ဖောက်ပြန်တာကို ခံခဲ့ရပြီး၊ ခင်ပွန်းသည်ဟာ အဲဒီအမြှောင်မယားနောက်ကိုလိုက်သွားကာ
ကျောင်းစရိတ်အခက်အခဲကြောင့် အပြာလောကထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေး
Comments Off on ကျောင်းစရိတ်အခက်အခဲကြောင့် အပြာလောကထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေး
ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် အပြာကားတွေရိုက်ကူးရင်း ကျောင်းစရိတ်ရှာခဲ့ရတဲ့ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် Belle Knox ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူမကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အခက်အခဲလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အသက် (၁၈) နှစ်မှာ စတင်ပြီး အပြာလောကထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ Knox ဟာ အခုအခါမှာတော့ ထရိုင်ဘက်ကာ (Tribeca) ဒေသမှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး နယူးရော့ဥပဒေကျောင်း (New York Law School) ကို တက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းစရိတ်နဲ့ သင်တန်းကြေး များလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြံရာမရခဲ့တဲ့ သူမဟာ (၂၀၁၄) ခုနှစ် မတ်လမှာ အဖော်အချွတ်တွေ ရိုက်ကူးရင်း အပြာလောကထဲ ၀င်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ Knox နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေအသိများကြတဲ့
တကယ့် စစ်မှန်သော သတ္တိပိုင်ရှင် ကျောင်းသူမလေး…
Comments Off on တကယ့် စစ်မှန်သော သတ္တိပိုင်ရှင် ကျောင်းသူမလေး…
ဘယ်သူမှ မသိလိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့အမှားအတွက် ပိုင်ရှင်ပြန်အလာထိ နေပူထဲ ထိုင်စောင့်ပြီး တောင်းပန် ကောင်မလေး အမှားကို သတ္တိရှိရှိဝန်ခံခဲ့လို့၊ ပညာသင်စာရိတ်နဲ့ အလုပ်အကိုင် အာမခံရရှိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး အသက် 18 နှစ်အရွယ် တရုတ်နိုင်ငံသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Zhang Youquin ကတော့ သူမရဲ့ ရိုးသားမှုကြောင့် ဒေါ်လာ သောင်းချီကုန်ကျမယ့် ပညာသင်ဆုအပြင်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပါ ထင်မှတ်မထားဘဲ ရရှိခဲ့တယ်လို့ Viral မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူမဟာ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ စိတ်ကူးထားသူဖြစ်ပြီး၊ တစ်ရက်မှာ သူမ စုမိဆောင်းမိထားတဲ့ ပိုက်ဆံအနည်းငယ်ကို ဘဏ်ဆီကို အပ်ဖို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စက်ဘီးကို ကားနှစ်စင်းရပ်ထားတဲ့ကြားမှာ ၀င်ရောက်ရပ်နားဖို့ ကြိုးစားစဉ် Lexus ES350 အမျိုးအစား ဇိမ်ခံကားကြီးကို သူမရဲ့ စက်ဘီးနဲ့ ခြစ်မိခဲ့ပါတယ်။